Akoho misy almond | Bezzia
Raha nisakafo tao amin'ny trano fisakafoanana sinoa ianao dia mety nanandrana ilay Akoho misy almond. Izahay dia tsy mampanantena fa ity dia mitovy amin'ilay iray, fa mamela antsika hankafy amin'ny tsotra sy hafa noho ny mahazatra an'ity akora ity.
Tsotra ny fanomanana ity akoho misy amandy ity. Hanana, eny, mba hahatsiarovanao mialoha amono ny akoho hany ka maka ny tsirony rehetra amin'ny saosy soja sy sakamalao. Adiny iray dia ampy, fa tsy mila afaka mijery ny famantaranandro ianao. Raha misy roa dia tsy hisy koa izany.
Ho fanampin'ny amandy amin'ity lovia ity nampiditra tongolo sy karaoty izahay. Azonao atao ny manapaka ny silaka an'io na manify kely kokoa, arakaraka ny toerana itiavanao azy. Raha tianao izy ireo tena malemy dia tapaho izy ireo; raha, etsy ankilany, tianao izy ireo al dente, tapaho mafimafy kokoa izy ireo. Sahinao ve ny manandrana azy?
Tratra akoho 1, diced
Saosy 40 ml⁣
1/3 sakamalao vita amin'ny sotrokely
1/2 siramamy sotrokely
Amandy 20 voakiky
Tongolo antonony 1, voatetika
Karaoty 3, voahitsakitsaka ary voahidy
Ron-kena akoho 150 ml
1-2 sotrokely katsaka
Ataovy ao anaty vilia ny cubes akoho, saosy, sakamalao ary siramamy vita amin'ny vilany. Afangaro tsara ary avelao izy hipetraka ao anaty vata fampangatsiahana adiny iray farafahakeliny ka ny akoho dia mandray tsiro.
Rehefa saika nandalo ny fotoana dia manafana ny diloilo amin'ny lapoaly ary asio saosy ny amygdala amin'ny hafanana somary hafanana mandra-pahatongan'ny volontany volamena. Mialà ary tahirizo.
Ao anatin'io vilany io ihany arotsaho izao ny tongolo sy ny karaoty mandritra ny 5 minitra.
Mandritra izany fotoana izany, saraho amin'ny ron-kena ny ron-kena akoho levona ao aminy ny vovo-katsaka.
Aorian'ny dimy minitra, avereno amin'ny lovia ny amandy ary ampidiro amin'ny marinade ny akoho ary ny ron-kena akoho, ao anatin'izany ny ron-kena nanafoanao ny Cornstarch.
Afangaroy sy andraho mandritra ny 15 minitra ny iray manontolo amin'ny hafanana somary ambany dia mahandro ny akoho sy ny saosy. Tao Bezzia no nandrahoinay nandrakotra ny antsasaky ny fotoana alohan'ny hanaparitahana azy.
Saosy tsy ampy matevina? Ataovy ao an-tsaina fa ny fahononam-po dia hahatonga anao ho matavy. Raha toa mbola manify aminao izy dia manampia vovo-katsaka bebe kokoa. Raha lasa matavy be kosa ianao, dia ampio rano na ron-kena.
Atolory mafana ny akoho amam-borona
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fomba fanamboarana » Carnes » Akoho misy amandy